Xulafaysi cusub iyo siyaasadda Soomaaliya oo waji lama filaan ah gashay!(XOG) | SMC
Home WARARKA MAANTA Xulafaysi cusub iyo siyaasadda Soomaaliya oo waji lama filaan ah gashay!(XOG)
Xulafaysi cusub iyo siyaasadda Soomaaliya oo waji lama filaan ah gashay!(XOG)
Sadaxdii maalin ee u danbeeysay waxaa ka socday magaalooyinka Muqadisho, Dhuusamareeb, Garowe iyo Ankara wada-hadalo qarsoon oo u dhaxeeya siyaasiyiin ku kala aragti duwanaan jirtay siyaasadda Soomaaliya, laakiin hada u muuqata in ay qaateen hal wado (mowqif) oo cusub taas oo waji cusub u yeelaysa siyaasadda dalka Soomaaliya, isla markaana abuuri doonta colaad siyaasadeed oo hor leh oo dalka galin doono marxalad aan waqtigeeda la joogin.
Madaxweyne Axmad Qoor Qoor oo ay gadaal ka riixayaan Fahad Yasin iyo Cabdikarin Guuleed oo wakiil ka ah Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ay wadahadal qarsoodi ah la fureen Madaxweyne Saciid Cabdullahi Deni iyo Madaxweyne Axmad Madoobe. Wada-hadaladaan oo intooda badan ku dhacay si fool-ka-fool ah ayaa sidoo kale ku dhacay dhanka qadka teleefanka whatsapp. Kulumadaan qarsoon ayaa waxaa looga hadlay afar qodob oo xasaasi ah:
In Farmaajo la siiyo waqti kordhin labo sano ah oo ka bilaabanaysa bisha Feberaayo
In Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre la badalo oo lagu badalo Cabdilkarin Guuleed oo ka soo jeeda beesha Habargedir, halka labo sano ka dib Saciid Deni uu u tartami doono jagada Ra’iisal Wasaaraha ama tan Madaxweynaha marka laga takhaluso MW Farmaajo.Go’aanka doorka Saciid Deni ku yeelan doono dowlada soo socota ayaa la gaari doono waqti danbe
In Saciid Deni loo fasaxo lacago $11 Milyan doolar ah oo ugu maqan dowlada Federaalka isla markaana $5 Milyan oo dheeraad ah loogu daro iyada oo la fiirinayo xaalada dalku ka jirta.
Axmad Madoobe ee afartiisa sano loo xaqiijiyo, qaybna ku yeesho golaha Wasiiradda ee la soo dhisi doono, lacagaha kaga maqnaa DFS loo sii daayo. Axmad Madoobe ayaa sidoo asbuucyada soo socda safar ku tago doona dalka Qatar, halkaas oo looga soo diri doono casuumad buuxda oo ay la socoto kaalmo dhaqaale.
Madaxweyne Axmad Qoor Qoor ayaa ka ahaa garwadeen kulamadaas qarsoodiga ah iyada oo ay si joogta ah khadka taleefanka ugu jireen Fahad Yasin iyo Cabdikarin Guuled oo wakiil kawada ah Madaxweyne Farmaajo. Dhanka Saciid Deni waxaa isagana dhankiisa wadahadalka ugu jiray ama hogaaminaayay Lataliyihiisa gaarka ah ee dhanka siyaasada, Ganacsade Shido.
Inta ay socdeen wada-hadaladaan waxaa dhowr-mar iska horimaad aragtiyo kala duwaansho uu dhex maray Axmad Madoobe iyo Saciid Deni taas oo ku sigatay in uu qorshahaan qarsoodiga ahi dhicisoobo.
Ka dib markii wada-hadalka uu galay heer xasaasi ah, isla markaana uu Axmad Madoobe keenay laba-labayn ama wal-wal isaga u gaar ah ayaa waxa la go’aamiyay in Axmad Qoor-Qoor iyo Axmad Madoobe labadaba la geeyo Garowe si shir sadax-geesood ah oo buuxa loo yeesho ka dib tacsida madaxweynihi hore ee Puntland Maxamed Xaashi.
Habeenkii xalay ahaa tacsiyada ka dib ayaa shirk albaabada u xiran yihiin waxa uu ka dhacay magaalada Garowe. MOL wali ma helin xogta rasmiga ah ee la xiriirta go’aanka ugu danbeeyay ee ka soo baxay kulankii xalay, laakiin waxaa naloo xaqiijiyay in uu ku dhamaaday is-af-garad, iyada oo markii danbe qadka taleefanka la soo galiyay Farmaajo.
Farmaajo oo qayb ah qorshahaan ayaa dhankiisa waxa uu xalay kulan kula qaatay Xarunta Villa Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Fedaraalka Soomaaliya oo ka wal-walsan qorshaha iyo go’aanada ka soo bixi kara shirka Dhuusamareeb. Farmaajo ayaa si farsamaysan u qanciyay xubnaha baarlamanka isaga oo u sheegay in uu shirka Dhuusamareeb tagi doono, wixii uu kala soo kulmana uu dib ugula soo noqon doono baarlamaanka.
Hadalka ka soo yeeray Farmaajo ayaa waxa uu si toosa ula xiriiraa qorshaha qarsoon ee Fahad Yasin hormuudka ka yahay kuna doonayo in uu helo qaab-cusub oo uu awooda dalka ku sii haysto isaga oo keensanayo Ra’iisal Wasaare cusub oo u adeega danahiisa gaarka ah.
Xasan Kheyre oo dhabarka laga taabtay, shaqo aan jirina loo diray
Dhanka kale Xasan Kheyre ayaa dhankiisa waxaa ku yimid isbadal cusub oo ah dhanka geedi-socodka siyaasadda doorashada dalka. Isbadalkaan waxaa talo ahaan ay ka timid qaar kamida madaxda dowlad Goboleedyada. Kheyre ayaa waxaa lagula taliyay in uu ka tanaasulo fakarka ah in doorasho dadban la qabto isla-markaana uu diirada saaro in uu ka shaqeeyo in xukumadiisa la siiyo labo sano oo waqti kordhis si uu dalka isagu u gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah.
Kheyre ayaa sadaxdii maalin ee la soo dhaafay waxa uu iibinaayay fakarka ah in waqti kordhis la siiyo xukumadiisa. Kheyre ayaa si gaar ah waxa looga codsaday in labada dowlad goboleed ee Hirshabeelle iyo Koonfiur Galbeed lagu qanciyo in ay ka tanaasulaan fakarka doorasho dadban. Si taasi u suuragasho isaga iyo labada madaxweyne ee kala ah Waare iyo Cabdicasisi Lafta Gareen ayaa looga tagay Dhuusamareeb si ay uga wada-hadlaan waqti kordhin go’aan wadajira ugula laabtaan sadaxda madaxweyne ee kale.
Xasan Kheyre oo caan ku ahaa been abuurka iyo indha-saarcaadka ayaa isaga lagu sameeyay indha-sarcaad farsamaysan, isaga oo lagu mashquuliyay mashruuc been abuur ah, halka sadaxda madaxdweyne ee kale ay wadaan qorshooyin isaga xididada loogu siibayo.
Madasha Xisbiyada Qaran oo dhexda ka baxday
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa u muuqda kuwa ku dhex dhumay labada koox oo ay kala hogaaminayaan Kheyre iyo Farmaajo. Waxana cad in ay ku jiraan jahaweere siyaasadeed.
Ugu danbeeyntii, siyaasadda Soomaaliya ayaa markale dib ula soo baxday wajigii horay looga bartay ee munaafaqaynta, been isku sheegida iyo beecinta danaha umadda Soomaaliyeed, su’aasha isweydiinta u baahan waxa ay tahay? yaa ku bixi doono qayaanada siyaasadeed ee ka socoto Dhuusamareeb iyo Muqadisho?
Previous articleDEG DEG: Kooxo Hubeysan oo Muqdisho Sabab layaab leh ugu dilay Wiil Arday ah
Next articleDaawo Wabiga Shabeelle oo ku fatahay degaano ka tirsan Shabeellaha Hoose